Ebumnobi Obi Ụdị Maka Ụmụaka - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Mkpụrụ obi na ogwe aka dị elu na ejiji ink nke ọchịchịrị na-eme ka nwa agbọghọ dị egwu
Ụdị obi a na-eji nkịkị nke ink nke dị n'elu nke otu nwa agbọghọ na-egosi ọdịdị dị egwu
2. Obi Ụdị na bicep enye ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, karịsịa na obere uwe na mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka Tattoo obi na -emepụta ink pink na ha bicep iji mee ka ha mara mma
3. Obi Ụdị maka apata ụkwụ eme ka anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka Tattoo obi na mkpịsị ink na-acha odo odo n'apata ụkwụ ha. Ogbugbu egbu egbu a na-eme ka mma nwanyi.
4. Ntugharị Ink na obi a Tattoo na agbacha akpụkpọ ahụ iji mee ka nwa agbọghọ mara mma
Ụdị imepụta nke ink na obi a Ụdị na igbe Ụdị akpụkpọ ahụ ga-eme ka nwa agbọghọ mara mma
5. Ụdị obi na-eji ejiji na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-aga na-acha anụnụ anụnụ ink imewe obi Obi na obi ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
6. Obi Ụdị na ogwe aka Mee nwa agbọghọ ka ọ dị ebube
Ụmụ agbọghọ na-achọ inwe obi Tattoo na ink ojii na ogwe aka ha iji nye ha anya dị ebube
7. Obi Ụdị na ogwe aka, mee ụmụ agbọghọ ka ha mara mma
Ụmụ nwanyị na akpụkpọ anụ peach ga-aga maka mkpịsị obi a na-egbukepụ egbuke egbuke site na ink pink, iji mee ka ha nwee anya mara mma.
8. Mkpụrụ obi na mkpịsị aka ojii na-eweta ọmarịcha anya
Ụmụ nwanyị Brown na nwa ntutu isi ga-ahụ obi Tattoo; egbu egbu a na-emetụta akpụkpọ ahụ ha ka ha wee mara mma
9. Uche obi maka ndi nwanyi na ngwakọta nke oji, ihe nkocha na ink nke ink na-eme ha ka ha di mma
Ụmụ nwanyị nwere akpụkpọ anụ aja na mkpịsị aka na-esighị ike hụrụ obi Tattoo ụdị egbu egbu a na-eme ka ha mara mma.
10. Uche obi na ejiji onk na-eme ka nwanyi lee anya
Ụmụ nwanyị ndị chọrọ icho achọ ga-aga maka obi Tattoo na-acha akwụkwọ ndụ na-acha odo odo, ink imewe.
11. Obi Ụdị maka Ụmụ nwanyị n'azụ azụ ha eme ka ha yie ihe ndi ozo
Brown akpụkpọ anya ụmụ nwanyị na-aga maka obi Tattoo na imepụta ink pink; egbu egbu egbu a na-eme ha ka ha dị mma
12. Mkpụrụ obi maka apata apata ụkwụ na-eweta ọmarịcha anya ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka Tattoo obi na ejiji pink ink ha. Eche egbu egbu a na-eme ka mma.
Tags:Uche obi egbugbu maka ụmụ agbọghọ
Geometric Tattoosmehndi imeweaka akaọnwa tattoosnnụnụudara okooko osisiNtuba ntughariakara ntụpọAnkle Tattoosakpị akpịndị na-egbuke egbukeegbu egbu okpuegbu egbu hennaegbu egbu mmiririp tattoosna-egbu egbuegbugbu egbugbuima ima mmaegbugbu maka ụmụ agbọghọndị mmụọ oziazụ azụegbu egbu ebighi ebiụkwụ akazodiac akara akaraegbu egbuokpueze okpuezeEgwu ugona-adọ aka mmaUche obiegbu egbu egbuegbu egbu diamondaka mma akan'olu oluenyí egbu egbuọdụm ọdụmagbụrụ eboenyi kacha mma enyimma tattoosakwara obiegbu egbu maka ụmụ nwokeaka akaegbu egbu osisi lotuskoi ika tattooarịlịka arịlịkaegwu egwuụmụnne mgbuechiche egbugbuỤdị ekpomkpangwusi pusidi na nwunye